Ch 19 यूहन्ना – 2माछा
घर / बाइबल / यूहन्नाको सुसमाचार / Ch 19 यूहन्ना
19:1 त्यसैले, पिलातसले त्यसपछि येशूले जिम्मा मा गरे र scourged.
19:2 र सिपाहीहरूले, काँडा मुकुट plaiting, यो उनको टाउको मा लगाएको. र तिनीहरूले उहाँको वरिपरि एक बैजनी लुगा राख्न.
19:3 र तिनीहरूले उहाँलाई आउँदै यसो भन्दै थिए, "जय, यहूदीहरूको राजा!"अनि तिनीहरूले उहाँलाई बारम्बार प्रहार.
19:4 त्यसपछि पिलातसले फेरि बाहिर गए, र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "हेर, म तिमी बाहिर ल्याउन छु, ताकि तपाईं म उहाँको विरुद्धमा कुनै मामला भनेर महसुस हुन सक्छ। "
19:5 (त्यसपछि येशूले बाहिर गए, काँडा मुकुट र बैजनी वस्त्र गरदै।) अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "मानिस हेर।"
19:6 त्यसैले, उच्च पूजाहारीहरू र परिचारक उहाँलाई देखेका थिए जब, तिनीहरूले कराए, यसो: उसलाई "क्रुसमा टाँग्नुहोस्! उसलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस्!"पिलातसले तिनीहरूलाई भने: "उहाँलाई आफूलाई लिनुहोस् र उसलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस्. म उहाँको विरुद्धमा कुनै मामला पाउन। "
19:7 यहूदीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए,, "हामी एक व्यवस्था छ, र व्यवस्था अनुसार, उहाँले मर्न पर्छ, लागि उसले आफूलाई परमेश्वरको पुत्र बनाएको छ। "
19:8 त्यसैले, पिलातसले यो शब्द सुनेका गर्दा, उसले धेरै डरलाग्दो थियो.
19:9 अनि उहाँले फेरि praetorium मा प्रवेश. र येशूलाई भने. "तिमी कहाँको हौं?"तर येशूले तिनलाई कुनै प्रतिक्रिया दिनुभयो.
19:10 त्यसैले, पिलातसले उहाँलाई भने: "तपाईंले मलाई कुरा गर्ने छैन? मैले तिमीहरूलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस् गर्न अख्तियार छ भन्ने थाहा छैन, र म तपाईंलाई जारी गर्न अख्तियार?"
19:11 येशूले जवाफ, "तपाईं मलाई कुनै पनि अधिकार छैन होला, माथिको तपाईंले दिइएको थियो नभएसम्म. यस कारण, उहाँले तपाईं महान् पाप छ गर्न जो मलाई हस्तान्तरण गरेको छ। "
19:12 र त्यसपछि देखि, पिलातसले उहाँलाई मुक्त गर्ने खोजिरहेका थिए. तर यहूदीहरूले बाहिर रो थिए, यसो: "तपाईं यस मानिसलाई मुक्त भने, तपाईं सम्राट्को मित्र कुनै छन्. आफूलाई बनाउँछ जसले कसैको लागि राजा सम्राट्लाई contradicts। "
19:13 अब जब पिलातसले यी शब्दहरू सुनेका, उहाँले बाहिर येशूले ल्याए, र उहाँले न्यायको सिटमा बस्नुभयो, एक ठाउँमा फुटपाथ भनिन्छ जसमा, तर हिब्रू मा, यो ऊंचाई भनिन्छ.
19:14 अब यो चाडको तयारीको दिन थियो, छैटौं घण्टा बारेमा. अनि उहाँले यहूदीहरूलाई भन्नुभयो, "आफ्नो राजा हेर।"
19:15 तर तिनीहरू बाहिर रो थिए: "उहाँलाई टाढा लिनुहोस्! टाढा उहाँलाई लिन! उसलाई क्रुसमा टाँग्नुहोस्!"पिलातसले तिनीहरूलाई भने, "म आफ्नो राजा क्रुसमा टाँग्नुहोस् गर्नेछैनन्?"उच्च पूजाहारीहरूले जवाफ, "हामी सम्राट्लाई बाहेक कुनै राजा छ।"
19:16 त्यसैले, त्यो त उहाँलाई क्रूसमा गर्न तिनीहरूलाई भन्दा हस्तान्तरण. र तिनीहरूले येशूले लिनुभयो र टाढा उहाँलाई नेतृत्व.
19:17 र आफ्नै पार पूरा, उहाँले कलवारी भनिन्छ जो ठाउँमा गयो, तर हिब्रू मा यो खोपडी को ठाउँ भनिन्छ.
19:18 त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा, र उसलाई दुई अरूलाई, प्रत्येक पक्ष मा एक, येशूले बीचमा संग.
19:19 त्यसपछि पिलातसले पनि एक शीर्षक लेखे, र उहाँले क्रूसमा माथि यो सेट. र यो लेखिएको थियो: येशू नासरी, यहूदीहरूको राजा.
19:20 त्यसैले, यहूदीहरूको धेरै यो शीर्षक पढ्न, येशूले क्रूसमा ठाउँमा लागि शहर नजिक थियो. र यो हिब्रू लेखिएको थियो, मा ग्रीक, र ल्याटिन मा.
19:21 त्यसपछि यहूदीहरूको उच्च पूजाहारीहरूले पिलातसलाई भने: लेख्न छैन, 'यहूदीहरूका राजा,'तर उहाँले भन्नुभयो कि, 'म यहूदीहरूको राजा हुँ।'
19:22 पिलातसले जवाफ, "के म लेख्न, म लिखित छ। "
19:23 त्यसपछि सिपाहीहरूले, तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा थियो जब, आफ्नो लुगा लिए, र तिनीहरूले चार भागहरु गरे, प्रत्येक सैनिक एक भाग, र अंगरखा. तर अंगरखा सहज थियो, सारा भर माथिबाट बुना.
19:24 त्यसपछि तिनीहरूले आपसमा भने, "हामीलाई यो काट्न गरौं, तर यसको सट्टा हामीलाई यो भन्दा बढी धेरै डाली गरौं, जसको हेर्न यो हुनेछ। "यो धर्मशास्त्र पूरा हुनेछ भनेर थियो, यसो: "तिनीहरूले आपसमा मेरो लुगा वितरण गरेका छन्, र मेरो vesture लागि तिनीहरूले धेरै डाली छ। "अनि साँच्चै, सिपाहीहरूले यी कुराहरू गरे.
19:25 येशूको पार आफ्नो आमा थिए छेउमा र उभिरहेका, र आफ्नो आमाको बहिनी, र Cleophas को मरियम, र मरियम मग्दलिनिलाई.
19:26 त्यसैले, येशूले आफ्ना आमा र उहाँले नजिकै उभिरहेका प्रेम जसलाई चेला देखेका थिए जब, उहाँले आफ्नो आमा भन्नुभयो, "नारी, आफ्नो छोरा हेर। "
19:27 अर्को, उहाँले चेला भन्नुभयो, "। आफ्नो आमा यहाँ" अनि घण्टा देखि, चेला आफ्नै रूपमा उनको स्वीकार.
19:28 यो पछी, येशूले सबै पूरा गरिएको थियो भनेर थाह थियो, त्यसैले क्रममा कि धर्मशास्त्र पूरा हुन सक्छ, उहाँले भन्नुभयो, "म तिर्खा।"
19:29 र एक कन्टेनर त्यहाँ राखिएको थियो, सिरका को पूर्ण. त्यसपछि, hyssop वरिपरि सिरका को पूर्ण स्पन्जले राख्दै, तिनीहरूले आफ्नो मुख यसलाई ल्याए.
19:30 त्यसपछि येशूले, उहाँले सिरका पाएका थिए जब, भने: "यो consummated छ।" अनि आफ्नो टाउको तल निहुरेको, आफ्नो आत्मा surrendered.
19:31 त्यसपछि यहूदीहरूले, यो तयारी दिन थियो किनभने, शरीर विश्राम-दिनमा क्रूसमा मा रहने थियो भनेर छैन (भनेर विश्राम लागि ठूलो दिन थियो), तिनीहरूले क्रममा पिलातसले बिन्ती आफ्नो खुट्टा भङ्ग हुन सक्छ, र तिनीहरूले लगिएको हुन सक्छ.
19:32 त्यसैले, सिपाहीहरूले नजिक, र, साँच्चै, तिनीहरूले पहिलो एक को खुट्टा भङ्ग, र उसलाई क्रूसमा थियो जसले अन्य को.
19:33 तर तिनीहरूले येशूको नजिक थियो पछि, तिनीहरूले देखे उहाँले पहिले नै मृत्यु भएको, तिनीहरूले आफ्नो खुट्टा तोड थिएन.
19:34 बरु, सिपाहीहरूले को एक भाला देखिए आफ्नो पक्षमा खोलियो, र तुरुन्तै त्यहाँ रगत र पानी बाहिर गए.
19:35 यो गवाही प्रस्ताव गरेको छ देखे जो र उहाँले, र आफ्नो गवाही सत्य हो. र उहाँले सत्य बोल्छ थाह, त्यसैले तपाईं पनि विश्वास गर्न सक्छ भन्ने.
19:36 यी कुराहरू लागि धर्मशास्त्र पूरा हुनेछ भनेर भयो: "तपाईं उहाँलाई एक हड्डी तोड छैन।"
19:37 अनि फेरि, अर्को धर्मशास्त्र यसो भन्छ: "तिनीहरूले उहाँलाई हेर्न हुनेछ, जसलाई तिनीहरूले घायल छन्। "
19:38 त्यसपछि, यी कुराहरू पछि, अरिमथियाका देखि यूसुफ, (उहाँले येशूको चेला थियो किनभने, तर यहूदीहरूको डरले एक गोप्य एक) पिलातसले बिन्ती येशूको शरीर लिन सक्छ भनेर टाढा. र पिलातसले अनुमति दिए. त्यसैले, उहाँले गए र येशूको शरीर टाढा लिए.
19:39 अब निकोदेमसलाई पनि आइपुगे, (जो राती सुरुमा येशूले गएका थिए) myrrh र घ्यु को एक मिश्रण ल्याउन, बारेमा सत्तरी पाउण्ड वजन.
19:40 त्यसैले, तिनीहरूले येशूको शरीर लगे, र तिनीहरूले सनी cloths र खुशबूदार मसलाहरु संग बाध्य, यो छ जस्तै यहूदीहरूको तरिका मुर्दा गाड्नु गर्न.
19:41 अब स्थानमा उहाँले त्यहाँ एक बगैचा थियो क्रूसमा थियो जहाँ, र बगैंचामा त्यहाँ एक नयाँ चिहान थियो, जसमा कुनै एक अझै सम्म राखिएको थियो.
19:42 त्यसैले, किनभने यहूदीहरूको तयारी दिन को, पछि चिहान नजिकै थियो, तिनीहरूले त्यहाँ येशूलाई राखिएको.